जीवनको अर्थ के हो, के थाहा पाउनुपर्छ ▷➡️ Postposmo | पोस्टपोस्ट
जीवनको अर्थ के हो, के थाहा पाउनुपर्छ
वचन मा बढ्दै | | अध्यात्म
दिनदिनै हजारौं मानिसहरू थकित, खराब मुडमा, थोरै ऊर्जामा र थाहै नपाई उठ्छन् जीवनको अर्थ के हो। सत्य यो हो कि पीडा र पीडाले तपाइँलाई तपाइँको निर्णयहरु को ट्रयाक गुमाउन सक्छ, त्यसैले तपाईले याद गर्न आवश्यक छ कि भगवानले तपाईलाई एक महत्वपूर्ण कारणको लागि पृथ्वीमा राख्नुभयो। खुशी र पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त गर्नको लागि, तपाईं बढ्दै जाँदा यसलाई पत्ता लगाउन पर्याप्त बलियो हुनुहोस्।
1 जीवन के हो?
2 जीवनको अर्थ के हो?
3 ईश्वरले दिएको जीवनको अर्थ
4 जीवनको अर्थ कसरी खोज्ने?
5 तपाईलाई कसरी थाहा हुन्छ तपाई सही दिशामा जाँदै हुनुहुन्छ?
शब्द जीवन भरि यसका धेरै अर्थ छन्। को रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ समय को ठाउँ जुन जन्म देखि मृत्यु सम्म चल्छ। साथै, यसले जनाउँछ एक संस्था हो वा एक जीव र त्यो संग सम्बन्धित छ एनिमेस गर्ने घटना र पदार्थलाई गति दिन्छ। अर्थात्, बाँच्नको लागि वातावरणमा विकास र कायम राख्न सक्ने क्षमता।
सामान्यतया, जीवन प्राप्त गर्नको लागि यो आवश्यक छ कि जीवित प्राणी बढ्छ, चयापचय गर्दछ, चाल र पुन: उत्पादन गर्दछ, यदि चाहियो भने। यसको उत्पत्ति लामो समयदेखि विभिन्न सिद्धान्तहरूद्वारा व्याख्या गरिएको छ। वास्तवमा, धेरै धर्मविद्हरू, जीवविज्ञानीहरू र खगोलविद्हरू सोच्छन् कि यसले एक अज्ञात ब्रह्माण्डलाई जन्म दिन्छ जुन यससँग सम्बन्धित छ। आत्मा र आत्मा को राज्य मृत्यु पछि।
सबैभन्दा लोकप्रिय संस्करण भन्छ कि जीवन सरल छ शरीरको साथ आत्माको मिलन पार्थिव। जसको परिणाम अनन्त आत्मा भएको नश्वर प्राणीमा हुन्छ। यो सोचाइन्छ कि सबै मानिसहरू एक मिशन पूरा गर्न पृथ्वीमा आउँछन्, त्यसैले जब तपाईं अवरोधहरू विरुद्ध अगाडि बढ्नुहुन्छ र खुसी हुन प्रयास गर्नुहुन्छ तपाईंले ख्रीष्टमा आउनुको अर्थ खोज्नुपर्छ।
यदि तपाइँलाई यो जानकारी मनपर्यो भने, तपाइँ यसको बारेमा पढ्न इच्छुक हुन सक्नुहुन्छ भगवानलाई कसरी खुसी पार्ने.
जब चीजहरू ठीक नहुँदा वा तपाईंको क्षमताले तपाईंलाई बलियो व्यक्ति बनाउँदैन भन्ने सोच्दा तपाईं हारेको महसुस गर्नु सामान्य कुरा हो। कुनै न कुनै तरिका, जीवनमा तपाईंले अलिकति अड्किए पनि आफ्नो लक्ष्यका लागि लड्न जारी राख्नुपर्छ, किनकि तपाईंका सपनाहरू तपाईंको दिनको अन्त्यसम्म ट्रंकमा भण्डारण गर्न सकिँदैन।
मानिसहरू द्वारा प्रायः सोधिने प्रश्नहरू मध्ये एक हो जीवनको अर्थ के होसत्य यो हो कि जवाफ प्रत्येक मा निर्भर हुनेछ। यद्यपि समयले सबै समस्याहरू समाधान गर्दैन, कहिलेकाहीँ यो आराम गर्न र वास्तवमा के तपाईंलाई खुशी महसुस गराउँछ भनेर सोच्न राम्रो छ। याद गर्नुहोस् कि तपाईं भित्र एक बहादुर र बलियो सिपाही छ, तर युद्ध जित्नको लागि तपाईंले आफ्नो मूल्य र रणनीति बनाउन सिक्नुपर्छ।
मानिस हुर्काउन, सिक्न, अरूलाई सिकाउन र मर्नको लागि जन्मेको हो, तर बन्नको लागि पनि पृथ्वीमा खुशी जसरी तिनीहरूले आफ्नै भाग्य निर्माण गर्छन्। तपाईं चित्रकार हुनुहुन्छ र ख्रीष्टले तपाईंमा देख्न चाहेको बुद्धि, शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्न के गर्ने भनेर तपाईंले निर्णय गर्नुहुन्छ।
सबै भन्दा माथि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं गर्व महसुस गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईंको प्रतिभा, विशेषताहरू र क्षमताहरू अरूको जस्तै अविश्वसनीय छन्। त्यसैगरी सोच्ने र काम गर्ने एक्लै क्षमता भए पनि आफूलाई सुधार्नको लागि समाजबाट सिक्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
असफलताको डर सधैं रहनेछ तर तपाईंले आफ्नो उद्देश्यका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहनुपर्छ। आफ्नो वरिपरि हेर्नुहोस कि कोहि पनि लडेर आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन, तब मात्र तपाई आत्मविश्वासका साथ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यसको विपरीत, आफैलाई अपमानित नगर्नुहोस् वा आफैलाई निम्न मान्नुहोस् आफैलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाईं बहुमूल्य हुनुहुन्छ र यो सोचेर उठ्नुहोस् कि तपाई अझ राम्रो हुनुहुनेछ, किनकि यस तरिकाले तपाईको जीवनको अर्थ हुनेछ।
ईश्वरले दिएको जीवनको अर्थ
म्याराथन दौडिएर बस्नु स्वस्थकर होइन, जहाँ काम मात्र हुन्छ, बिल तिरिन्छ र सामाजिक दायित्व पूरा हुन्छ। त्यसोभए एक अनन्त चक्रमा, त्यो भन्नु हो कि यो हरेक दिन र वर्ष दोहोर्याइएको छ जब तपाईं सोच्नुहुन्छ कि जीवनको गहिरो अर्थ छ कि छैन।
वास्तवमा, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले राम्रो उद्देश्यको लागि त्यसो गर्नुभयो, जुन तपाईंले पूर्णतया बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण, तपाइँको कर्तव्य हो जब सम्म तपाइँ थाहा छैन अन्वेषण गर्नु हो तिम्रो हुनुको कारण के हो र तिमीलाई संसारमा किन पठाइयो।
पवित्र शास्त्रहरूका अनुसार जीवनको वास्तविक अर्थ ईश्वरसँगको सम्बन्ध पुनर्स्थापनामा पाइन्छ। यो आदम र इभको पापको कारणले हराएको थियो, त्यसैले यसलाई सुधार गर्नु सबैको कर्तव्य हो। त्यसै गरी, तपाईंले अनन्तता प्राप्त गर्नुहुनेछ जब तपाईं आफ्नो खराब कर्महरूको पश्चात्ताप गर्नुहुन्छ र राम्रोको लागि आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्नुहुन्छ।
एकचोटि तपाईंले ख्रीष्टलाई पछ्याउनुभयो भने, वचनबाट सिक्नुहोस् र प्रार्थनामा सङ्गति राख्नुभयो भने तपाईंले पूरा भएको महसुस गर्नुहुनेछ। बाइबलका अनुसार, काम गर्ने सबैले उहाँबाट सिकेमा आराम गर्न सक्षम हुनेछन्, किनभने उहाँ नम्र हुनुहुन्छ र तिनीहरूलाई दिनुहुनेछ। उनीहरुको आत्माले शान्ति पाओस। तपाईंले दिनहुँ के खोजिरहनु भएको छ भन्ने बारे अन्तिम छनौट भए तापनि, सृष्टिकर्ताले तपाईंलाई माया गर्नुहुन्छ र तपाईंको लागि उत्तम चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा मनमा राख्नुहोस्।
ख्रीष्टियन जीवन धेरै मानिसहरूले रोजेको होइन। त्यसकारण, परमेश्वरले उहाँमा विश्वास गर्ने चेलाहरूसँग र उहाँको उद्देश्य पछ्याउन आफ्नो पार्थिव इच्छाहरू छोड्न चाहनेहरूसँग मिलेर काम गर्नुहुन्छ। यदि तपाइँ पूर्ण महसुस गर्न चाहनुहुन्छ भने, पवित्र धर्मशास्त्रले तपाइँलाई तपाइँको छिमेकीलाई प्रेम गर्न, राम्रो गर्न, इमानदार हुन, वचन प्रचार गर्न र प्रार्थना गर्न बताउँछ।
जीवनको अर्थ कसरी खोज्ने?
पहिले नै उल्लेख गरिएझैं, जीवनको अर्थ त्यस्तो चीज हो जुन मानवताको सुरुवातदेखि नै समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। यो किनभने मानिसहरू समस्याबाट आनन्दमा कसरी जाने भनेर जान्न चाहन्छन्। यस प्रश्नको धेरै जवाफहरू छन् र तिनीहरू प्रायः सबै सम्बन्धित छन्, किनकि तपाईंले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको ईश्वरको नाममा काम गर्नु हो, त्यो हो, वफादार र निष्पक्ष तरिकामा।
तर यो यति मात्र होइन, यो पनि हो तपाईंले एक गतिविधि खोज्नु पर्छ जसले तपाईंलाई पूर्ण महसुस गराउँछ पृथ्वीमा तपाईंको बसाइको अवधिको लागि। त्यसैले, यहाँ केहि सुझावहरू छन्:
जीवनको अर्थ केवल एक मिशन मार्फत पाउन सकिन्छ, जुन तपाईंले पूरा गर्नुपर्छ: यो खुशी हुनको लागि सबैभन्दा आधारभूत तरिका हो, किनकि तपाईंले आफ्नो उद्देश्य र तपाईंले सिर्जना गर्दा के निर्माण गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि, जब तपाइँ अरूको सेवा गर्नुहुन्छ, तपाइँ महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाइँ केहि लायक हुनुहुन्छ र तपाइँ आफ्नो प्रतिभा मार्फत संसारमा केहि योगदान गर्नुहुन्छ।
तपाईंको जीवन प्रेम मार्फत अर्थ हुन सक्छ: यो तथ्य हो कि तपाईंको छिमेकीको हेरचाहले तपाईंलाई खुशी बाँच्न अनुमति दिन्छ, यसले तपाईंलाई लक्ष्यहरू पूरा गर्न, परियोजनाहरू कायम राख्न र हार नमान्न मद्दत गर्दछ। सामान्यतया, मानिसहरू सबै भन्दा राम्रो र निरन्तर प्रेरणा हुन सक्छ।
चिन्तनद्वारा जीवनको अर्थ पाउन सकिन्छ: अर्थात् तपाईंले दिनभरका साना साना कुराहरू, विवरणहरू र राम्रो आनन्दहरूको आनन्द लिनु पर्छ। कोही-कोही मानिसहरू खेलकुद, कला, अध्ययन, चलचित्र हेर्न, र यात्रा गरेर पृथ्वीमा आफ्नो समय बिताउन चाहन्छन्। यी केही उदाहरणहरू मात्र हुन् जसलाई हाइलाइट गर्न सकिन्छ, किनकि परिस्थिति झन् जटिल छ र सबैले आ-आफ्नो बाटो जानुपर्छ।
तपाईलाई कसरी थाहा हुन्छ तपाई सही दिशामा जाँदै हुनुहुन्छ?
धेरै सजिलो, यदि तपाईलाई थाहा छ कि कसरी दुख र खुशी बीचको भिन्नता छ, तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ कि कुन कार्यहरूले तपाईलाई राम्रोसँग बाँच्न मद्दत गर्दछ। निराशाहरू प्रक्रियाको भाग हुन्, त्यसैले तिनीहरूमा शोक नगर्ने प्रयास गर्नुहोस् तर तपाईंले परमेश्वरले तपाईंलाई सुम्पनुभएको मिशनहरू पूरा नगरेसम्म जारी राख्नुहोस्।
यदि तपाईलाई नराम्रो लाग्छ र चीजहरू तपाईले चाहानु भएको तरिकाबाट बाहिर आउँदैन भने, केहि निश्चित रूपमा काम गरिरहेको छैन। त्यसोभए त्यो कालो बादलबाट बच्नुहोस् जसले तपाईंलाई सूर्य देख्न दिँदैन र शान्तिमा अगाडि बढ्नको लागि सही कामहरू गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र रोचक तथ्यहरू जान्नुहोस् आध्यात्मिक मुक्ति।
यदि तपाईंलाई यो लेख मनपर्‍यो भने जीवनको अर्थ के हो, हामी तपाईंलाई हाम्रो ब्लग भ्रमण गर्न र आध्यात्मिकता श्रेणीमा प्रकाशित अन्य पोस्टहरूको आनन्द लिन आमन्त्रित गर्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: पोस्टपोस्ट » अध्यात्म » जीवनको अर्थ के हो, के थाहा पाउनुपर्छ
बाइबल कसले लेख्यो, तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा र थप कुराहरू
भगवानलाई कसरी खुशी पार्ने, के गर्ने र थप